Sushma Adhikari (Model and Actress) Interview
Topic: Sushma Adhikari (Model and Actress) Interview
Author Topic: Sushma Adhikari (Model and Actress) Interview (Read 73859 times)
Re: Sushma Adhikari (Model and Actress) Interview
« Reply #100 on: March 16, 2019, 03:59:34 AM »
53398526_2270581543229347_6244754735541664959_n.jpg (51.66 kB, 1080x701 - viewed 389 times.)
« Reply #101 on: March 18, 2019, 10:38:43 AM »
sushma .jpg (56.61 kB, 1066x716 - viewed 379 times.)
« Reply #102 on: June 21, 2019, 10:02:17 PM »
62437323_144259199975304_5061852833526370932_n.jpg (223.06 kB, 1080x820 - viewed 344 times.)
64397817_180014636337397_294231227079386674_n.jpg (178.58 kB, 1080x809 - viewed 373 times.)
64351014_435921530575767_712254666204614709_n.jpg (332.78 kB, 1080x1350 - viewed 437 times.)
« Reply #103 on: October 08, 2019, 06:18:00 AM »
72301595_546313112608717_4300811483769470976_n.jpg (128.19 kB, 1080x1080 - viewed 315 times.)
Screenshot_20190912-082651.jpg (952.44 kB, 1080x2280 - viewed 323 times.)
« Reply #104 on: March 07, 2020, 09:52:12 PM »
नायिका सुस्मालार्इ शुभदिनकाे प्रश्न
ब्वार्इ फ्रेन्ड भए त बिहे गरिहाल्थे नि!
Kallywood Actress Nepal SushmaAdhikari
– मोडल एवं नायिका सुस्मा अधिकारी पछिल्लाे समयमा म्युजिक भिडियाेमा व्यस्त छिन्। ‘फूलबारीको बाटो हिँड्दै’ बोलको गीतबाट अभिनय थालेकी सुस्माले तीन सय बढी म्युजिक भिडियो खेलिसकेकी छन्। सुस्मासँग गरिएको रमाइलो गफगाफ।
सबै तस्बिर नायिका सुस्मा अधिकारीको फेसबुकबाट।
काठमाडाैं, जेठ २७–मोडल एवं नायिका सुस्मा अधिकारी पछिल्लाे समयमा म्युजिक भिडियाेमा व्यस्त छिन्। ‘फूलबारीको बाटो हिँड्दै’ बोलको गीतबाट अभिनय थालेकी सुस्माले तीन सय बढी म्युजिक भिडियो खेलिसकेकी छन्।
उनले रोग हो कि दोष हो, तिमीलाई भूल्ने बहानामा, नशा पिउने बानीलगायतमा अभिनय गरेकी छन्। उनले कञ्चन शाहीको अनौठो प्रेमु र निरञ्जन कुसुजीको पिपलुनामक फिल्ममा अभिनयसमेत गरेकी छन्। उनीद्वारा अभिनित भोजपुरी फिल्म दिवाना तुु रिलिज भएको थियो उनै सुस्मासँग गरिएको रमाइलो गफगाफ।
१.केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
–केही दिनदेखि म्युजिक भिडियो सुटिङ हुँदै छन्। त्यसैमा व्यस्त छु। र केही दिनमै ती भिडियोह सार्वजनिक हुनेछन्।
२.अहिलेसम्म कति फिल्म र म्युजिक भिडियो खेल्नुभयो?
म्युजिक भिडियो त लगभग ३०० भन्दा नै भइसक्यो तर, फिल्म भने तीन वटामा खेले।
३.पहिलो चलचित्र कुन हो ?
–पहिलो अनौठो प्रेम कथा हो।
४.फिल्म क्षेत्रमा कसरी लाग्नु भयो ?
सानो उमेरदेखि नै अभिनय क्षेत्रमा रुची थियो। र, कहिले काँही टिभी हेरेर कलाकारको नक्कल गर्थे। त्यतिबेला देखिनै अभिनयमा लाग्ने सोच बनाएकी थिए।
५.विवाह गर्ने उमेर भएन र, विवाह कहिले गर्ने। ब्वार्इ फ्रेन्ड त होलान नि?
हाहाहा.. लामा हाँसाे। अहिले विहे गर्ने उमेर भएकाे छैन। ३,४ वर्ष पछि गर्ने। ब्वार्इ फ्रेन्ड भए त विहे गरिहाल्थे नि!
६. कुन विवाह गर्ने साेच छ?
त्यो त त्यतिबेला नै थाहा हुन्छ। लभ म्यारिज कि एरेन्ज भनेर। तपाईलाई मन पर्ने मौसम कुन हो?
७.कुन माैसम मन पर्छ?
चिसो मौसम नै मन पर्छ। गर्मी भन्दा चिसो। त्यो पनि मंसिर महिना राम्रो लाग्छ।
८.अबको लक्ष्य के?
– मुभी खेल्न थालिसकेकी छु। यसैलार्इअगाडि बढाउनु नै मेरो लक्ष्य हो।
९.तपाईको फेब्रेट स्टार?
–नेपाली राजेश हमाल र भारतीय नायिका माधुरी दीक्षित मन पर्ने हिरो हिरोइन् हुन्।
« Reply #105 on: May 12, 2020, 08:43:51 AM »
« Reply #106 on: June 29, 2021, 09:56:51 PM »
Sensual Ropai Dhaan diwaos ( Paddy Field Day)
209202411_939103876667092_2031501702817433606_n.jpg (213.99 kB, 1080x1350 - viewed 70 times.)
209520313_1262611220823364_8660843797442600921_n.jpg (425.52 kB, 1080x1920 - viewed 63 times.)
209054134_402974517655407_8997441112413206622_n.jpg (141.1 kB, 1080x1350 - viewed 66 times.)
83466921_2816527605136766_1688595711086795042_n.jpg (163.56 kB, 1080x1350 - viewed 61 times.)
« Last Edit: July 12, 2021, 01:19:07 AM by samir211 »
« Reply #107 on: August 20, 2021, 08:21:47 AM »
#FRESHRELEASE hot video
Sushma-Adhikari.jpg (27.04 kB, 750x397 - viewed 190 times.)
Sushma_safe.jpg (57.27 kB, 1140x598 - viewed 190 times.)
Sushma Adhikari - Full video https___youtu.be_mp5vR8-0Qfc _ Facebook.mp4 (627.71 kB - downloaded 44 times.)
KADA aayo ta.jpg (84.11 kB, 1140x598 - viewed 191 times.)
« Last Edit: August 20, 2021, 08:56:25 PM by samir211 »
« Reply #108 on: August 28, 2021, 10:51:58 AM »
मोडेल शुष्मा अधिकारी ,विगत देखि वर्तमान सम्म संघर्षको कथा
युवराज न्यौपाने २०७८ भाद्र ११, शुक्रबार २०:०६
सानै उमेरदेखि गित संगितमा रमाउदै आएकी सुष्मा अधिकारी पछिल्लो समय नेपाली म्युजिक भिडियो क्षेत्रकी चिरपचिरित अनुहार हुन । कैलालीको धनगढीमा वुवा गंगा धर अधिकारी र आमा मनुकुमारी अधिकारीको को कोखवाट डिसेम्वर ३, १९९० मा जन्मीएकी अधिकारी ले हाल सम्म करिव् ४०० गितमा सफल अभिनय गरीसकेकी छन् । पञ्चोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनगढीवाट प्रारम्भीक शिक्षा हासील गरेकी शुष्माले काठमाडौं विश्वविद्यालय बाट स्नातक सम्मको अध्यान गरेकी छन् । शुरुवादी दिनमा गित संगीत संगे खेलकुदमा समेत विषेश रुची राख्ने सुष्मा कुनै वेला राम्रो ब्याडमिन्टन खेलाडी समेत थिईन । तर उनले आफ्नो खेललाई राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउन सकनिन किनकि उनको शोकीनको विष य ग्लैमरस दुनियाँ थियो र त्यसैमा रमाउन थालिन र आफ्नो रोजाई यसैलाई वनाएर अगाडी वढीन । खाने मुखलाई जुङाले छेक्दैन भने जस्तै उनको यो सोखिनको यात्रालाई कसैले रोक्न सकेन र आज शुष्माअधिकारी नेपाली साँगीतिक क्षेत्रकी एक उज्वल नक्षेत्रको रुपमा नेपाली साँगीतिक वजारमा चम्कीरहेकी छन् । रोग हो की दोष हो नामक गीत वाट नेपाली साँगीतिक क्षेत्रमा पाईला टेकेकी शुष्मा ले आज जम्म साँगीतिक क्षेत्रवाट पछाडी फर्केर हेर्नु परेको छैन । म्युजिक भिडियो संगै नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा समेत अव्वल नायीकको रुपमा आफुलाई स्थापित गरेकी शुष्माले केहि नेपाली र भोजपुरी चलचीत्रमा समेत अभिनय गरेकी छन् । ￼
कञ्चन शाहीको फिल्म ‘अनाउठो प्रेम कथा’ बाट सुष्मा अधिकारीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गरेकी हुन् । । फिल्मले बक्स अफिसमा औसत व्यापार गरेको थियो । झण्डै आधा दर्जन फिल्मा अभिनय गरीसकेकी शुष्माले चचित्र जय मधेशमा गरेको अभिनय तारीफयोग्य छ । यस चलचीत्रवाट उनले धेरे दर्शक स्रोताको मन जितेकी थिईन । निरन्तर चलचीत्रको लागी अफर आईरहेको भएपनी चलचीत्रको तथा र विषयवस्तु हेरेर मात्रै आफुले अभिनय गर्ने गरेको शुष्माको भनाई छ । चलचीत्र संगै उनले खेलेका थुप्रै म्युजिक भिडियो सुपरहीट भएका छन् । र आज सम्म पनी नेपालका ख्यातीप्राप्त म्युजिक भिडियोृ निर्देशकको रोजाईमा शुष्मा पर्ने गर्छन । तर पछिल्ले समय आफुले भिडियो छनौट गरेर मात्रे अभिनय गर्ने गरेको शुष्मा वताउछिन् । नयाँ नयाँ ठाउको भ्रमण गर्न र फुर्सदको समयमा पुस्तक पढ्न रुचाउने शुष्मा को सरल व्यावहारको कारण पनी उनि चर्चामा छिन् ।
शुष्माले थुप्रै म्युजिक भिडियो र चलचित्र मार्फत केहि राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय अवार्ड समेत हात पारेकी छन् । सन् २०१९ मा दोहा कतारमा आयोजना भएको स्टार ईन्टरनेशनल अवार्ड, नेशनल वक्स अफिस उत्कृष्ट महिला मोडल म्युजिक भिडियो अवार्ड, उत्कृष्ट आधुनिक गित महिला मोडल पव्लीक च्वाईस अवार्ड, सन् २०१८ मा मलेसीयामा आयोजना भएको नेपाल म्युजिक भिडियो अवार्ड,नेपाल म्युजिक अवार्ड २०७४, २०१७ मा लोक गित मार्फत उत्कृष्ट महिला मोडल अवार्ड। ओएस नेपाल द्धारा पप गित मार्फत उत्कृष्ट महिला म्युजिक भिडियो अवार्ड लगायतका थुप्रै अवार्ड समेत हात पारेकी छन् । शुष्माले अभिनय संगै देश तथा विदेशमा आयाना भएका विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रहरुमा समेत आफ्नो उत्कृष्ट प्रस्तुति मार्फत धेरे दर्शक सा्रेताको मन जितेकी छन् । नेपालमा आयोजना भएका प्रय सवै मेला महोत्सव र साँगीतिक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिई सकेकी शुष्माले विदेशमा भएका कार्यक्रम मार्फत धेरै नेपालीलाई आफ्नो उत्कृष्ट प्रस्तुति माफृत नृत्यको जादु पस्कीसकेकी छन् । शुष्माले अष्ट्रेलीया, लण्डन,युरोपका धेरे देशहरु,दुवई, कतार, मलेसीया, थाईल्याण्ड, ईजरायल लयागतका धेरै देशमा आफ्नोा प्रस्तुति मार्फत विदेशमा रहेका नेपालीको समेत मन जितसिकेकी छन् । यसरी निरन्तरको मेहनत, दुख, र संघर्ष वाट अगाडी वढेकी शुष्माले नेपाली साँगीतिक क्षेत्रमा आफुलाई एक अव्वल नायीका र मोडलको रुपमा आफुलाई स्थापित गरेकी छन् ।
उनको पछिल्लो वजारमा आएको साथमा वोलको म्युजिक भिडियोले समेत चर्चा वटुलीरहेको छ । निकै हट अवतारमा प्रत्सुत भएकी शुष्माको यस भिडियोमा गरेको अिभिनयले सवैलाई आर्कषित गरेको छ र दर्शक स्रोताको मन जितिरहेको छ ।
पछिल्ले समय वजारमा आएको सुष्मा अधिकारीको धमाकेदार अभिनय रहेको साथमा वोलको गितले निकै चर्चा वटुलीरहेको छ । अधिकारीको हट सिनले भरिएको ‘साथमा’ गीतको भिडयो सार्वजनिक भए संगै उनको चर्चा फेरी एकपटक चुलिएको छ । राजसीको निर्देशन एवं सम्पादन रहेको ‘साथमा’ गीतको भिडियोलाई ‘वान पोइन्ट’ युट्युव च्यानलमार्फत् सार्वजनिक गरिएको हो ।
सार्वजनिक गीतको भिडियोमा सुष्मासँगै राजसी, सुशान, विकाश र थापाकाजीको समेत अभिनय रहेको छ । नारकोस बिट्सको संगीत सिर्जना रहेको ‘साथमा’गीतमा मास्टरिगं र शब्द वान पोइन्ट टिमको रहेको छ ।
236225189_941702066395215_843574968320301151_n.jpg (140.04 kB, 1080x1349 - viewed 59 times.)
209578788_396131071823350_2738377788050387062_n.jpg (255.27 kB, 1080x810 - viewed 52 times.)
« Last Edit: August 28, 2021, 11:15:33 AM by samir211 »
« Reply #109 on: August 28, 2021, 11:13:05 AM »